आजको राशिफलः बि.स. २०७५ साल असोज १८ गते बिहिबार इश्वी सन् २०१८ अक्टुबर ४ तारीख – पुरा पढ्नुहोस्……
आजको राशिफलः बि.स. २०७५ साल असोज १८ गते बिहिबार इश्वी सन् २०१८ अक्टुबर ४ तारीख
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल असोज १८ गते बिहिबार इश्वी सन् २०१८ अक्टुबर ४ तारीख आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी तिथी तिष्य नक्षत्र शिव योग वणिज करण चन्द्रमा कर्कट राशिमा सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु दशमी श्राद्ध विश्व पशु प्राणी दिवस –
भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । गरीरहेको कार्यमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेको हुनाले बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । पारीवारिका सदस्यहका स्वास्थमा सामान्य तनाव देखा पर्ला ।
बल तथा प्रराक्रममा बृद्धि हुनेछ । बिश्वासिला मित्रजनहरु बाटँ भने धोकाहुन सक्नेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा अव्वल स्थान प्राप्त रहनेछ । यात्राका क्षेत्रमा भने बिशेष सावधानी अपनाउनु होला । कार्य क्षेत्रमा अपजसको सम्भाबना रहनेछ ।
नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । वाणीका कारण आफ्न्तजनहरु रुष्ट रहन सक्नेछन । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । तपाईको कार्य बाटँ लाभ उठाउनेहरु प्रशस्त हुनाले साबधानि अपनाउनु होला ।
गरीरहेको कार्यलाई पुर्णता दिन नसक्दा मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा पारीवारिक सरसहयोग प्रशस्त प्राप्त रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । हरकोहि ब्यक्तिहरुलाई आफ्नो बशमा पार्ने क्षमतामा भने बृद्धिहुनेछ ।
देश प्रदेशको यात्राको योगको सम्भाबना रहेकोछ । तात्कालिक आर्थिक अभाबको सम्भाबना रहनेछ । भोगबिलासिताका साधनको खरीदको क्षेत्रमा सामान्य खर्च रहनेछ । तपाईको कार्यमा त्रुटि खोज्नेहरुको सङ्ख्यामा बृद्धिहुनेछ ।
आम्दानिका बिभिन्न स्रोतहरु फेला पर्नेछन । मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती समय खर्चनु पर्नेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा अधिक परीश्रम खर्चनु पर्नेछ । अधुरा कार्य सम्पादन गर्नका निम्ती गोप्यता अपनाउनु उत्तम रहनेछ ।
सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्नु उत्तम रहनेछ । आफन्तजनहरु बिचबाटँ टाढा भएको महसुुस हुन सक्नेछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
यात्राकारक दिनरहेकोछ । प्रिय ब्यक्तिहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय तपाईलाई मिल्न सक्नेछ । मित्रजनहरुको अधिक निकटताले सामान्य झन्झटमा फसाउला । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ ।
बिश्वासिला ब्यक्तिहरुबाटँ धोका हुन सक्नेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानिबाटँ बिशेष लाभ उठाउन सकीएला । कार्यक्षेत्रमा अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ । अनावश्यक बादबिवादका कारण मानसिक तनाबका सामना गर्नु पर्नेछ ।
जिवन साथीको साथ सहयोगमा अधुरा कार्य सम्पादित रहनेछन । मानसिक चन्चलताको कारण नयाँ कार्यको थालनिको सम्भाबना रहेतापनि कार्य क्षेत्रमा लगनसिलताको कमी महसुस हुनेछ । ब्यापार ब्यवसायका निम्ती समय मध्यम रहनेछ ।
तपाई द्वारा सम्पादित कार्यबाटँ मित्रजनहरु लाई यथेष्ट लाभ प्राप्त रहनेछ । आफन्तजनहरुको स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । अरुको बहकावमा लाग्नाले सामान्य झन्झटको सामना गर्नु पर्नेछ । भोगबिलासका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला ।
अध्यन अध्यापनका निम्ती अधिक समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । आय आर्जनका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । कार्य क्षेत्रमा पदोन्नतीको सम्भाबना समेत रहनेछ । सन्तानको सम्बन्धी समस्याले सताउला । – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे /
Prevमौरी पालेरै वार्षिक पाँच लाख आम्दानी, मौरीको घर पनि राम्रो बिक्री हुने
Nextगाजा फडानी गर्न गएका प्रहरी र स्थानियवीच लफडा, देखियो अहिलेसम्मकै अनौठो दृश्य (भिडियो सहित)
आजको राशिफल: वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ १२ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ मई २६ तारिख
टंक बुढाथोकी नहुदा छोरा एआरले अशोक दर्जीलाइ यसरी साथ् दिए, हेर्नुहोस सिन्धुलिको भब्य कार्यक्रमको लाइभ (भिडियो सहित)
रबि लामिछानेले गरे- आफुलाई देशबाटै लखेट्ने खेल र सिधा कुरा जनतासँग बन्द गर्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास (भिडियो सहित)